တရုတ်နိုင်ငံ၌ “တိဘက် ငြိမ်းချမ်းစွာလွတ်မြောက်ခြင်း နှစ် ၇၀ ပြည့်” အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ - Xinhua News Agency
“တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၌ အံ့အားသင့်ဖွယ် ကျွမ်းဘားအလှပြ ပုံ”
တွန်ဂါနိုင်ငံ မြို့တော် Nuku'alofa တွင် ဆူနာမီဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အပျက်အစီးများပြား
လာဆာ ၊ ဩဂုတ် ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ မြို့တော် လာဆာမြို့ရှိ Potala နန်းတော်ရင်ပြင်၌ ဩဂုတ် ၁၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် “တိဘက် ငြိမ်းချမ်းစွာလွတ်မြောက်ခြင်း နှစ် ၇၀ ပြည့်” အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား မြင်ကွင်းများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ မြို့တော် လာဆာမြို့ရှိ Potala နန်းတော်ရင်ပြင်၌ ဩဂုတ် ၁၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် “တိဘက် ငြိမ်းချမ်းစွာလွတ်မြောက်ခြင်း နှစ် ၇၀ ပြည့်” အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားမြင်ကွင်းများအား ဖော်ပြပါဓာတ်ပုံများတွင် ကြည်ရှုခံစားနိုင်ပါသည်။(ဆင်ဟွာ)
Photo 1 – Pigeons fly over the sky duringagrand gathering to celebrate the 70th anniversary of the peaceful liberation of Tibet at the Potala Palace square in Lhasa, southwest China’s Tibet Autonomous Region, Aug. 19, 2021. More than 20,000 people from various ethnic groups attended the event held in Lhasa. (Xinhua/Zhai Jianlan)
Photo2– Pupils attendagrand gathering to celebrate the 70th anniversary of the peaceful liberation of Tibet at the Potala Palace square in Lhasa, southwest China’s Tibet Autonomous Region, Aug. 19, 2021. More than 20,000 people from various ethnic groups attended the event held in Lhasa. (Xinhua/Sun Ruibo)
Photo3– A grand gathering is held to celebrate the 70th anniversary of the peaceful liberation of Tibet at the Potala Palace square in Lhasa, southwest China’s Tibet Autonomous Region, Aug. 19, 2021. More than 20,000 people from various ethnic groups attended the event held in Lhasa. (Xinhua/Sun Ruibo)
Photo4– People attendagrand gathering to celebrate the 70th anniversary of the peaceful liberation of Tibet at the Potala Palace square in Lhasa, southwest China’s Tibet Autonomous Region, Aug. 19, 2021. More than 20,000 people from various ethnic groups attended the event held in Lhasa. (Xinhua/Jigme Dorje)
Photo5– Balloons are released duringagrand gathering to celebrate the 70th anniversary of the peaceful liberation of Tibet at the Potala Palace square in Lhasa, southwest China’s Tibet Autonomous Region, Aug. 19, 2021. More than 20,000 people from various ethnic groups attended the event held in Lhasa. (Xinhua/Huang Jingwen)
Photo6– People attendagrand gathering to celebrate the 70th anniversary of the peaceful liberation of Tibet at the Potala Palace square in Lhasa, southwest China’s Tibet Autonomous Region, Aug. 19, 2021. More than 20,000 people from various ethnic groups attended the event held in Lhasa. (Xinhua/Purbu Zhaxi)
Photo7– A grand gathering is held to celebrate the 70th anniversary of the peaceful liberation of Tibet at the Potala Palace square in Lhasa, southwest China’s Tibet Autonomous Region, Aug. 19, 2021. More than 20,000 people from various ethnic groups attended the event held in Lhasa. (Xinhua/Chogo)
စပိန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် West Nile အဖျားရောဂါဖြစ်ပွား